SomaliTalk.com » Sports
Somali Week London oo maalintii Shanaad ka soconaya
Somali Week London oo maalintii Sadaxaad ,Afaraad iyo Shanaad ka soconaya Garoonka New River . London 09.08.2009: Garoonka New River ayaa waxaa si habsami ah uga socda ciyaaraha Somali Week London oo ka furmay asbuucii hore bartamihiisa Waqooyiga magaalada London. Ciyaaro aad u xiisa badan ayaa waxaa isaga hor yimid kooxaha kale ah : Holand B V Ilamos, Liecester Stars V Nabadda, Wembley United...
Somali Week oo si rasmi ah London uga bilowday
Somali Week 2009 oo si rasmi ah maanta uga biloowday garoonka New River Staduim oo ku yaal waqooyiga magaalada London. Sawiro badan halkan ka daawo |Qaybta labaad ee sawirada daawo Waxaa galabta 8/4/09 magaalada London xaafada Totenham si rasmi uga furmay garoonka New River Stadium koobka Somali Week London 2009. Koobkaas oo ay ka qayb qaadanaya 12 kooxood oo kubadda cagta oo kale duwan oo Soomaali...
Carmo vs Bosaso – Ciyaar xiiso badan
Ciyaar aad u xiisa badan oo ay iskaga Horyimadeen Magaalada Carmo iyo Bosaso oo ka dhacday Garoonka kubada Cagta ee Magaalada Carmo. Sawirada Halkan ka daawo (GUJI….) Ciyaar aad u xiisa badan ayaa shalay ka dhacday garoonka kubada Cagta ee Magaalada Carmo ciyaartaasi oo ahayd mid saxiibtinimo ah ayaa waxaa ay ku soo dhamaatay 1-2 waxaana guushu ay raacday oo 2da gool keensatay Kooxda kubada cagta...
Jadwalka cayaaraha Somali Week London 2009
London: Waxaa magaalada London ee caasimada dalka Ingiriiska lagu qabanayaa koob loogu magacdarey Somali Week 2009.. Koobkaas waxaa ka qayb qaadan doono kooxo ka dhisan dalka Ingiriiska iyo dalalka Sweden, Holand , Canada, isla markaana waxa iyana ka soo qayb gali doono ciyaartooydii hore kubada cagta dalka Soomaaliya, kuwaasoo ka kale iman doono dalal kale duwan. Tartankaan ayaa lagu qaban doono garoon...
Halkudheg: london 2009